ပြန်လည်ပြုပြင်မထားသော Galaxy Note7ယူနစ်များကိုရောင်းချမည်ဟု Samsung မှအတည်ပြု Androidsis
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Galaxy Note7ယူနစ်များကိုရောင်းချရန် Samsung အတည်ပြု
Samsung သည်၎င်း၏ပျက်ပြားထားသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Galaxy Note7၏ယူနစ်အားလုံးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာတွင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကလာမည့်သတင်းများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ မှန်းဆ အနည်းဆုံးပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက။
Samsung သည်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Galaxy Note7စမတ်ဖုန်းကိုရောင်းချမည် သို့သော်ဤစီမံကိန်းအသစ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမူထုတ်ဖော်ရန်မရှိသေးပါ။
1 Galaxy Note7ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
Galaxy Note7ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
အကျဉ်းမှတဆင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Android စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ၊ Samsung ကပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Galaxy Note7ကိုစတင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်နေကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်s.
အဆိုပါကြေငြာချက်ကို "Samsung ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဆင်ပြေစွာနည်းလမ်းဖြင့်ပြန်လာသည့် Galaxy Note7 ကိရိယာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ရန်" ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအသေးစိတျသို့သွားကြပြီမဟုတ်s သည်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားသည့် Galaxy Note7စမတ်ဖုန်းများကိုစျေးကွက်အမျိုးမျိုးရှိဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီများနှင့်သက်ဆိုင်သောသဘောတူညီချက်များရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်စတင်မိတ်ဆက်မည့် Galaxy Note XNUMX စမတ်ဖုန်းများကိုရောင်းချမည့်နိုင်ငံများကိုကြေငြာလိမ့်မည်ဟုကြေငြာရန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဒီ Terminal အမျိုးအစားအတွက်လက်ရှိဝယ်လိုအားကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုအချိန်။
Galaxy Note7ကိရိယာများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဖုန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ [ပြန်လည်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်] သို့မဟုတ်ဖုန်းများငှားရမ်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်မှုသည်စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များနှင့်အော်ပရေတာများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအပြင်ဒေသလိုအပ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ စျေးကွက်များနှင့်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်များကိုအညီဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
မအောက်မေ့သောသူတို့အဘို့, ၂၀၁၆ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် Samsung သည်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်အစားထိုးခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်စမတ်ဖုန်းအတော်များများအပြီးအပူလွန်ကဲစေသောဘက်ထရီပြproblemsနာအချို့ကြောင့်မီးလောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်အစားထိုးယူနစ်အတော်များများလည်းချွတ်ယွင်းခဲ့ကြပြီးအဆုံးသတ်ပေါက်ကွဲနှင့် / သို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်း, ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီ နောက်ဆုံးတွင် Galaxy Note7ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာတွင်အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်6.
ကုမ္ပဏီသည်ပြီးပြည့်စုံသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ကြော်ငြာ Que Galaxy Note7၏ပြcausesနာများသည်၎င်း၏ဘက်ထရီများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ပြeightနာမပေါ်ပေါက်စေရန်ရှစ်မှတ်စစ်ဆေးသည့်စနစ်အသစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်နေစဉ်။
Samsung က၎င်း၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းကိုကြေငြာခြင်းမတိုင်မီနှစ်ရက်အလိုတွင်ဖြစ်သည်။ Galaxy S8ဒီရှစ်မှတ်လုံခြုံရေးပရိုဂရမ်အသစ်အောက်မှာထုတ်လုပ်တဲ့ပထမဆုံး terminal ဖြစ်လိမ့်မယ်။
မဆိုသံသယမရှိဘဲ, ဒီနေ့သတင်းကို ၄၈ နာရီတောင်ကျော်ပြီးကျော်သွားလိမ့်မယ်၎င်းသည် Samsung ဘက်မှအလွန်အဆင်ပြေသောရွေ့လျားမှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းစွန့်စားမှုရသောလုပ်ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည် မည်သည့်စျေးကွက်များရောင်းချမည်ကိုလေ့လာရန်မှာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည် ဒီ Galaxy Note7ကို (အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံများမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်) ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပြီးလူအများကြားမှာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကုမ္ပဏီကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပေမယ့်သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ၄ င်း၏အနာဂတ်ဖုန်းများမပေါက်ကွဲနိုင်အောင်တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ထားကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ် နောက်တစ်ခါ
Samsung က Galaxy Note7၏အချို့ယူနစ်များကိုလည်းယနေ့ကြေငြာခဲ့သည် အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်စမ်းသပ်နမူနာများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုမည့် semiconductors နှင့် camera modules များအပါအ ၀ င်။
ကျန်ရှိသော Galaxy Note7စက်ပစ္စည်းများအတွက် semiconductors နှင့် camera module များကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအထူးပြုသည့်ကုမ္ပဏီများကခွဲထုတ်ပြီးစမ်းသပ်မှုနမူနာများကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
Galaxy Note7၏အခြားယူနစ်များသည်ကြေးနီ၊ နီကယ်၊ ရွှေနှင့်ငွေတို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မည့်“ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအထူးပြုသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိသောကုမ္ပဏီများ” ဖြစ်သည်။
Samsung အနေဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မညီညွတ်သောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောအပြောင်းအလဲများကိုပြုလုပ်ရန်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်ပူးပေါင်းရန်စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Galaxy Note7ယူနစ်များကိုရောင်းချရန် Samsung အတည်ပြု
WhatsApp စာများကိုသင်ဖျက်ရန် ၂ မိနစ်အချိန်ရလိမ့်မည်
Ulefone Power2ကို10ပြီ ၁၀ ရက်အထိရောင်းမည်